SIDA LOO DHIGO DABACASAHA EE KAYDINTA XILLIGA JIILAALKA MAQSIN OO KALIYA MA AHA: WAX KASTA WAA KU SAABSAN SIDA LOO SAMEEYO SI SAX AH IYO INTA XAJMIGA UUSAN KU DHICIN IYADOO KU XIRAN HABKA DOORTAY - KHUDRADDA
Aan kuu sheegno sida si haboon u kaydiso karootada: iyo sidoo kale waxyaalihii kale ee qaabka khudradda
Karootada waxaa ku jira fiitamiinno faa'iido leh iyo walxaha raadraaca iyo waa shey caadi ah miiska. Waa qalab aad u fiican oo lagu ilaalinayo caafimaadka wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Si karootada si ay u faa'iido ma aha oo kaliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado shuruudaha ay dhigista iyo kaydinta. Kaydinta ku haboon waxay u baahan tahay heerkul gaar ah, qoyaan iyo qaab hawo.
Diyaarinta waxay bilaabmaysaa guga, ka hor inta beero.
Wixii abuur laga sameeyey miraha la kala doortay ee noocyada kala duwan ee u adkeysanaya nolosha shelf dheer.
Noocyadaas waxaa la siiyaa gaar ahaanna leh hanti loo yaqaano tayada ilaalinta. Bacaha abuurka leh, hantidan waxaa lagu tilmaamay (faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada ku habboon ee dabacasaha iyo waqtiyada kaydinta, halkan ka akhriso).
Laakiin, marka lagu daro tayada haynta, waxaa jira dhowr waxyaalood oo kale oo saameeya tayada iyo ilaalinta dabacasaha xilliga qaboobaha:
Xaaladaha cimilada xagaaga.
Heerka ku haboonaanta gobolka.
U hoggaansanaanta xaaladaha kaydinta.
Noocyada dabacsan ee-Bisaylkiisa ayaa ugu habboon kaydinta xilliga qaboobaha. oo leh muddo ah bisaylkiisa 110-130 maalmood ama dhexe-Bisaylkiisa, kaas oo u bislaadaan 105-120 maalmood. Noocyada qaar ayaa lagu keydiyaa jiilaalka ka fiican kuwa kale. Waxa lagu gartaa iska caabin adag oo qabow, way yar yihiin waxayna leeyihiin tayo fiican. Marka kaydinta lumiso dhadhanka iyo guryaha waxtarka leh.
Kuwa ugu caansan waxay ka mid yihiin:
Haddii aadan aqoonin noocyada kala duwan, ama aadan kaydin boorsada miraha, fiiri qaabka asalka ah. Noocyada Bisaylkiisa hore waxay badanaa gaaban yihiin loona soo koobay (karootiga reer Paris) oo leh tayo ilaalin xun.
Karootada dheeriga ah, dabacasaha caadiga ah waxay ku haboon tahay kaydinta xilliga jiilaalka. Dufanka weyn, dhererka ayaa la keydin karaa.
Halkan waxaa ah hababka kaydinta lagu baaro waqtiga iyo dhaqanka:
sida balka dhirta oo kale ah;
in diirka basasha iyo toon;
ee qolof dhoobo ah.
On our site waxaad ka baran doontaa siyaabo kale oo lagu keydin karootada:
gudaha gasacadaha iyo sanduuqyada;
Muhiimada ay leedahay jaantusyada haboon
Xaqiijinta jaantusyada iyo diyaargarowga dhismaha ee karootiga la dhigi doono waa mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee muddo dheer oo aan lahayn khasaaro qaboobaha:
Qolka waxaa la diyaariyaa bil ka hor inta aan la samayn calaamadda iyo bilaabida hawo qaadista iyo jeermiska.
Nadiifinta waxaa lagu sameeyaa baaritaan baaruud ama baaruud.
14 maalmood ka dib marka jeermiska qashinka lagu daro.
Copper sulphate sidoo kale waxaa lagu daray biyaha leh lime slaked. Marka la nadiifiyo, isticmaalka lagu taliyey waa nus litir oo xal ah halkii 1m2.
Si aan loo jebin oo qalalan, karootada waxay u baahan tahay xaalado gaar ah oo kaydinta:
heerkulku ma aha mid ka hooseeya -1C oo aan ka badnayn + 2C;
qoyaan ahaan qiyaas ahaan 90-95%;
Xitaa iyada oo isbedel yar oo heerkulka, karootada waxay bilaabaan inay qalalan, kallana, ama Gagaash. Horeba at + 5C geedi socodka biqilka wuxuu bilaabmaa.
Sidee loo dhigaa haynta jiilaalka?
Kuwa ugu caansan ee ka mid ah dadka degaanka xagaaga iyo mid ka mid ah kuwa ugu fudud. Ciidda waxaa lagu hayaa heerkul deggan. Taas awgeed, dabacasaha ma qallajinayaan iyo sheyga waxyeelada leh ee aan dhicin.
Soo dheji kaydinta xilliga jiilaalka waxay dhacdaa marxalad:
Kaydinta ciidda waxay u baahan tahay sanduuqyo alwaax ama bac ah iyo ciidda dhoobada ah.
Biyaha qaar ayaa lagu daraa ciidada, ka dibna, inta lagu jiro kaydinta, ciidda ayaa laga buufiyaa dhalada buufin.
Qeybta hoose ee sanduuqa waxaa lagu daboolay lakabka ciidda 3 ilaa 5 cm qaro weyn.
Karootada waxaa lagu dhigaa saf ku yaal cammirka si gooni gooni ah.
Dhammaan tan waxa lagu daboolay ciid iyo kabad dabacsan ayaa dib loo dhigay.
Berriga laga soo qaado qoryaha geed ama geed. Walxaha dabiiciga ah ee ku jira iyaga ma ogolaanayaan horumarinta bakteeriyada bakteeriyada iyo joojinta karootada.
Tiknoolojiyada ayaa tilmaamaya sida isku midka ah ee ciidda. Layers of dhadday interspersed leh layers of dabacasaha. Habkan, khudradda waa la ilaaliyaa ilaa goosashada xiga.
Xeerarka kaydinta miiska ama bacda:
Bacaha bacaha leh awoodda 5-30 kg dabacasaha karinta.
Ku kaydi Maqsin on shelf ama taagan.
Qoorta boonka ayaa la furay.
CO2 waxaa laga saaraa dabacasaha. Sidaa darteed, haddii bacda la xiro, waxaa sii kordhaya diirada gaasta oo la kariyo.
Haddii foomamka uumeysiga ku yaallo dusha sare ee bacda. Sidaas darteed qoyaanka qoyaanka ee qolka waa la kordhiyaa.
Golaha Si looga hortago cufnaanta laga soo galo hoosta, bacda ayaa laga jaray hoosta lime waxaa la dhigayaa meel u dhow caanaha kaas oo ku faafi doona qoyaan xad dhaaf ah.
In diirka basasha, xididdada waxaa lagu keydiyaa ilaa inta ay sida balka. Maaddooyinka muhiimka ah ee khaas ah ayaa ka hortagaya horumarinta bakteeriyada iyo kalluunka.
Layers of dabacasaha waxaa lagu wareejiyey by lakabyada diirka haray ka dib goosashada iyo foosha basasha iyo toon. Iyada oo habkan, karootada waxaa lagu kaydiyaa ilaa goynta sanadka soo socda.
Karootada waxaa sidoo kale lagu kaydiyaa qolof ah dhoobo la qalajiyey. Lakab khafiif ah oo ka ilaaliya dabacasaha ka imanaya qiyaastii ilaa goynta soo socota.
Half baaldi dhoobo ah ayaa lagu qasi karaa biyo.
Markuu dhoobo bararsan yahay, biyaha ayaa mar kale lagu daraa, oo isku dhafan. Natiijo ahaan, isku dar ah waa inaysan ka dhicin ka badan labeen dhanaan.
Qeybta hoose ee sanduuqa ama dambiisha waxaa lagu xardhay foorno.
On the safka xumbo dhigay karootada. Khudaarta waa inaysan taaban midba midka kale.
Lakabka koowaad ee dabacasaha waxaa ka buuxsantay dhoobo.
Sida ugu dhakhsaha badan ee dhoobada dhoobo, lakabka labaad ayaa la dhigaa oo dhoobada mar kale ku shubtay.
Waxaa jira hab kale oo lagu keydiyo. Tani waxay udhalatay dhoobada:
Xalka dhoobada waxaa loo diyaariyaa si la mid ah oo karootiga waxaa loo yareeyaa si kale, si dhoobo u daboolo dhammaan.
Ka dib markii taas, karootada ayaa soo baxay si ay u qalalaan meel wanaagsan oo hawo leh.
Kadibna sanduuqyada ama dambiilaha.
Waxan ka wada hadalnay arinkan sida hadba suurtagal ah in loo maydho karootada kahor intaan la dhigin kaydinta.
Imisa ayaad ku kaydin kartaa?
Qaboojiyaha, ilaa 2 bilood.
Bacaha bacaha, ilaa 4 bilood.
Ciidda, ilaa 8 bilood.
In dhoobo, balka bacriminta, diirka basasha-1 sano ilaa goosashada soo socda.
Haddii dabacasaha, xididdo iyo baradhada lagu keydiyo tufaax, waxay si deg deg ah uga sii darayaan.
Tufaax, gaar ahaan bislaado, waxay ka soo baxaan etylene kaas oo xididdadu marwalba xanuunsadaan oo ay noqdaan kuwo aan ku habbooneyn cuntada. Inta lagu jiro kaydinta jiilaalka, ilaa 30% ee dabacasaha.
Kordhinta nolosha shelf iyo iska ilaali khasaaro waxay noqon kartaa haddii aad si joogto ah u xalliso dalagga, saaro xididdada la xidho iyo jarjar dushooda. Iyada oo habdhaqanka haboon ee dhammaan nidaamyada la xiriira diyaarinta dabacasaha ee kaydinta, waxaad ku cuni kartaa miraha casiir leh oo dhan sanadka oo dhan.